के 2018 मा ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सजिलो छ?
लिंक इञ्जिनले सँधै खोजी इन्जिन अनुकूलनमा प्राथमिक भूमिका खेलेको छ. यद्यपि, लिङ्क निर्माण गर्ने तरिका प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गरिएको छ. 2013 मा सबैभन्दा ठूलो एक प्रकाशित हुँदा Google ले उनको पेंगुइन अद्यावधिक सिर्जना गर्यो. यो अद्यावधिकले सबै बिन्दुहरू स्पष्ट बनायो, इनबाउन्ड लिङ्कको गुणस्तर बढाउँदै र सबै स्प्यामी लिङ्कहरू मूल्याङ्कन गर्दै.
हाम्रो दिनहरुमा, लिंक इमारत एक अत्यन्त विवादास्पद मुद्दा हो. एक विशेषज्ञले दावी लिङ्कको मूल्यलाई अस्वीकार गरेको छ भने अरूले तर्क गर्दछ कि यो वर्ष साढे दशकमा लगातार बढेको छ. यी गल्तीहरू स्प्यामहरू devuling गरेर कारणले गर्दा, र यस क्षेत्रमा प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्ने निरन्तर Google अद्यावधिकहरू हुन्.
तथापि, लिङ्क इमारतको बारेमा तपाईले के सुन्नु भयो भने, यो अझै पनि सीधा तपाईको साइट रैंकिंगमा प्रभाव पार्छ।. कुनै वेबसाइटले गुणवत्ता र सान्दर्भिक इनबाउन्ड लिङ्क बिना SERP मा उच्च श्रेणी निर्धारण गर्न सक्छ.
हाल, 2017 वर्ष अन्त्यमा आउँदैछ, र हामी क्रिसमस छुट्टियाँ 2018 को पूर्वमा छौं. Google अझै स्प्याम लिङ्क इमारत प्रविधिहरू र प्रासंगिक आगमन लिङ्कहरू पुरस्कार विरुद्ध संघर्ष गर्दछ. स्प्यामी लिङ्क निर्माण प्रविधिहरू मोटाईमा गएका छन्. अधिक र अधिक वेबमास्टरहरूले गुणस्तर सामग्री शिल्प र लिंक भवनमा लगानी गर्न निर्णय गर्छन्. यसले यस क्षेत्रमा उच्च प्रतिस्पर्धाको कारण बनाउँछ.
एक सहयोग गर्न सक्दैन तर आश्चर्य गर्न सक्ने नयाँ परिवर्तनहरू जुन हामी 2018 मा लिङ्क निर्माण क्षेत्रमा अनुभव गर्न सक्छौं. एक समृद्ध वेबसाइट मालिकको रूपमा, तपाईंलाई काम गर्न जाँदैछ भन्ने कुरा हुन आवश्यक छ र के छैन.
यस आलेखमा तपाई भविष्यमा अनुकूलन खेलको शीर्षमा रहन केहि भविष्य-प्रमाण साधन पाउनुहुनेछ।.
2018 मा ब्याकलिङ्क कसरी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ?
सबै म्यानुअल तरिकाले बनाउनुहोस्
हामी पुरानो स्वचालित संसारमा बस्छौं जहाँ म्यानुअल रूपमा सिर्जना गरिएका चीजहरू उच्च मूल्यमा छन्, विशेष गरी लिङ्क इमारत क्षेत्रमा।. सुनिश्चित गर्नुहोस कि तपाईं आफ्नो बजार आला नेताहरु लाई अधिक गुणवत्ता backlinks प्राप्त गर्न को लागी संदर्भित गर्नुहोस. स्वचालित रूपमा इ-मेलहरूका लागि नजानुहोस् किनकि तिनीहरू ठेगानाकर्ता द्वारा स्प्यामको रूपमा आकर्षित हुन्छन्.
यसबाहेक, स्वचालित लिङ्क इमारत सफ्टवेयरको लागि गिर नगर्नुहोस् किनभने यसले तपाईंको साइट पोष्ट र ब्रान्ड प्रतिष्ठालाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ।. म दृढतापूर्वक पेशेवर एसईओ विशेषज्ञहरूलाई उल्लेख गर्दै सिफारिस गर्दछु जसले तपाईंको साइटमा मैन्युअल रूपमा लिंक बनाउन सक्छ.
स्किस्क्रैपर लिंक इमारत टेक्निक
यो एक मनपर्ने सामग्री-ड्राइभिङ प्रविधी हो जुन एसईओ विशेषज्ञहरूले प्रयोग गरेको वेब स्रोतको लिङ्क प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ।. यो तपाईंको आलामा सामग्रीको गुणस्तर टुक्रा फेला पार्नमा आधारित छ जुन पहिले नै एक सम्मानित स्रोतको रूपमा विचार गरिएको छ र त्यहि सन्देश भित्र राम्रो सामग्री सिर्जना गर्ने अवसर खोजी गर्न सकिन्छ।.
तपाईंलाई आफ्नो लिङ्कहरू त्यहाँ राख्नको लागि तपाईंको मार्केट आर्टमा नयाँ सामग्री प्रकाशनहरू ट्रयाक गर्न आवश्यक छ. यदि यो सामग्री एक सम्मानित वेब स्रोतमा प्रकाशित गरिएको छ भने, यो प्रायः सम्भव छ उच्च स्तरको. यही कारणले तपाइँ प्राधिकारी स्रोतबाट लिंक रस प्राप्त गर्न उत्कृष्ट अवसर हो. अनुसन्धान आधारित सामग्री सिर्जना गरेर, तपाईं मूल एकलाई बाहिर पठाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ Source .